ऐश्वर्या रायलाई लाग्यो यस्तो नराम्रो चीजको लत, बच्चन परिवारको करोडौँ खर्च गर्दै
एजेन्सी । ऐश्वर्या रायले बच्चन परिवारमा बुहारी बन्नुभन्दा पहिले नै विश्व सुन्दरीको ताज पहिरिसकेकी थिइन् । र कयौँ बलिउडका हिट फिल्म पनि खेलिसकेकी थिइन् ।
गीत गाउँदा गाउँदै अरिजित सिंहले यस्तो शब्द प्रयोग गरेपछि...
काठमाडौँ । गायकीबाट सबैको मन जित्दै आएका अरिजित सिंह अहिले विवादमा तानिएका छन् । एउटा पुरानो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि उनको पक्षरविपक्षमा बोल्नेदेखि मजाक उडाउनेहरूसम्म सलबलाएका छन् ।
यस्तो छ फिल्म ‘पद्मावत’ को कथा
यो फिल्म हेर्नुपर्ने फिल्ममा पर्छ । फिल्ममा तपाई राजपूतको बहादुरी देख्न सक्नुहुनेछ । रानी पद्मावतीको सुन्दरताको साथसाथै उनका पराक्रमले तपाईलाई अचम्मित बनाउँनेछ ।
बलिउडका यी ५ चलचित्र, जसमा भिलेनले पाए हिरोलेभन्दा धेरै चर्चा
मुम्बई– बलिउडमा जति पनि चलचित्र आउने गरेका छन् । ती चलचित्रले अत्यमा केहीकेही सन्देश दिएकै हुन्छ । अधिकांश चलचित्रमा असत्यलाई सत्यले जितेको देखाइन्छ ।
दीपिका पादुकोण नाक र कान काटेर ल्याउनेलाई एक करोड भारुको घोषणा !
एजेन्सी । विहीबार रिलिज भएको बलिउड फिल्म ‘पद्मावत’का निर्देशक सञ्जय लीला वंशालीको टाउको कटेर ल्याउनेलाई ५१ लाख भारु दिने घोषणा भएको छ । बज्रमण्डल क्षत्रिय राजपुत महासभका पदाधिकारीले फिल्म पर्दशन भइरहेको बेलामा सो घोषणा गरेका हुन् ।
जब ऐश्वर्याको ढोकामा पूरा रात रुदैँ बिताए सलमानले...
एजेन्सी । सलमान र ऐश्वर्याको प्रेम कहनी सन् १९९७ मा शुरु भएको थियो जब ऐश्वर्याले बलिउडमा भर्खरै पाइला टेकेकी थिइन् । त्यहि नै बेला सलमान सोमीसँग गहिरो प्रेममा थिए र उनीसँग बिहे गर्ने सोचमा थिए तर ऐश्वर्याको आगमनले सलमानको मन बदलिदियो ।
भंसालीका हरेक चलचित्रमाथि किन हुन्छ विवाद ?
मुम्बई – निर्देशक सञ्जय लीला भंसालीको चलचित्र ‘पद्मावत’ बिहीबारबाट देश तथा विदेशका कैयौँ मुलुकमा एकै पटक रिलिज भएको छ । तर चलचित्रको विषयलाई लिएर भारतका कैयौँ मुलुकमा अझै चर्को विरोध भइरहेका छन् ।
आमा जयालाई एक्लै छोडेर अभिषेक ऐश्वर्याको पछि लागेपछि ...
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता तथा सुपरस्टार अमिताभ बच्चनको पारिवारिक झमेलाले यतिबेला भारतीय सञ्चार माध्यमहरु तातिरहेका छन् । अभिषेक र ऐश्वर्या नयाँ घरमा सर्ने कुरालाई लिएर शुरु भएको विवादले आमा जया र छोरा अभिषेकको बीचमा समेत दरार पैदा गरेको छ ।
रणविरले थामे दीपिकाको हात
माघ ११ – रणविर सिंह र दीपिका पादुकोणले २०१८ भित्रमा विवाह गर्ने खबर आइरहेका बेला यी दुईको जोडीले पुनः त्यो खबरलाई मजबुत बनाउन सहयोग गरेका छन् ।